အဘယ်ကြောင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ » အဘယ်ကြောင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး
သင်သည်သင်၏ခြံထဲမှာသို့မဟုတ်မွေးမြူရေးခြံကိုအလှဆင်ချင်လျှင်, guardrail တစ်ခုမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ရပါမည်။ သူတို့ဟာ Guardrails ပိုပြီးနှင့်ပိုမိုလူကြိုက်များဖြစ်လာကြပြီထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကော်လံ, crosspieces, တံခါးရွက်သကဲ့သို့, ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကနေစုဝေးနေကြတယ်
နှင့်ဝင်း privacy ကို၏လိုက်စား။ အကောင်းတစ်ဦး guardrail နှင့်သင့်အရည်အသွေးကို Choose
ဘဝတွေအများကြီးတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဗီနိုင်းကိုရှေးခယျြ
အဆိုပါ guardrails, ပစ္စည်းအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်နှင့်သစ်သားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်
ဗီနိုင်း, လူမီနီယမ်နှင့်သံ။ အစောပိုင်းကာလများတွင်သစ်သားလူကြိုက်အများဆုံးအတားအဆီးပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သစ်သား guardrails ယေဘုယျအားဖြင့်အဖြူရောင်ခြယ်နေကြပြီး, polyvinyl chloride တို့ (PVC) ၏ဖန်ဆင်းအဖြူ guardrails ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ သစ်သား guardrails ရှိအောင်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သစ်သားအလွယ်တကူမဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ကြိတ်, ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်ပန်းချီအပါအဝင်နှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ သစ်သား guardrail ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်ကြောင့်လည်းညှိုးနွမ်းမီးခိုးရောင်ဖြစ်လာ, အစိုဓာတ်, အတိုင်နှင့်မှိုကိုစုပ်ယူနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သစ်သားအစိမ်းရောင်လှည့်တော်မူမည်။ အိမ်ပြင်, ထင်းအဖြစ်
1980 ခုနှစ်တွင်ဗီနိုင်းအတားအဆီးတွေကပထမဦးစွာတန်ဖိုးနည်းနှင့်တာရှည်ခံမြင်းခြံခြံစည်းရိုးဖြေရှင်းချက်အဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးကျက်စားရာအရပ်မှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ယခုမှတက်, လျှောက်လွှာသမိုင်းထက်ပိုနှစ်ပေါင်း 30 ရှိခဲ့ပါပြီ, သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာရင့်ကျက်ထားပါတယ်, မကြာခဏတန်တိုင်းနှင့်ကျက်စားရာအရပ်၏အအလှဆင်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုလည်းပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းအပေါ်ဘက်သံလမ်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ မြင်းဘေးထွက်ရထားလမ်းတာမျိုးလျှင်ပင်တစ်အမြင်အာရုံအတားအဆီးအဖြစ်, ကမြင်းဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဗီနိုင်းအတားအဆီး၏အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ကို extrusion ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗီနိုင်း guardrail ၏ခွန်အားမြှင့်တင်ရန်အလို့ငှာခုနှစ်, လျောက်ပတ်များသောအားဖြင့်တစ်နံရိုးဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်, ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်, အလူမီနီယံချွတ်လည်းဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ guardrail ပုံမှန်အားဖြင့် 36 96 မှလက်မ (91 244 မှစင်တီမီတာ) အမြင့်မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးဆေးအရောင်ခြေလှမ်းမရှိဘဲထည့်သွင်းသည်။ ဒါဟာ extrusion ရှေ့တော်၌ထိုကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်, နှင့်အရောင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ဗီနိုင်း guardrail တပ်ဆင်ခကော်လံအပေါငျးတို့သတပ်ဆင်၏ပထမဦးဆုံးကအရမ်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်: အစဉ်အလာနက်ရှိုင်းသောတွင်းကိုတူးဖို့ tool ကိုမှတဆင့်ပထမဦးဆုံးကျောက်စရစ်၏အောက်ခြေ၌ထား (x 36 လက်မအများအားဖြင့် 12 လက်မ), ထို့နောက်ကော်လံနက်နဲရာထဲသို့ဖြောင့်မတ်ဖြစ်ပါသည် အပေါက်, ကွန်ကရစ်လောင်းဒါဟာအရပျ၌ fixed ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ fixed နေကြသည်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ခြေလှမ်းပို့စ်မှဂိုးဘားကို fix ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင် guardrail လီဗာသို့မဟုတ်တံခါးကို panel ကို install လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာဗီနိုင်း guardrail တပ်ဆင်ရန်ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေးမြန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျစစ်ဆင်ရေးလမ်းညွှန်အတိုင်း installation ကိုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးစနစ်ကွန်ကရစ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်အထက်ပါတပ်ဆင်ခနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. မရပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတပ်ဆင်နည်းလမ်းမှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပြောင်းအလဲများကိုခွင့်ပြုပါ။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး features တွေ:
သစ်သားခြံစည်းရိုးကိုမှန်မှန်ခြယ်ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း, နှင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအချိန်ကြာမြင့်စွာမပြောင်းလဲအရောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အဆိုပါ guardrail ၏မျက်နှာပြင်မြေမှုန့်သို့မဟုတ်တခြားညစ်ညမ်းထိတွေ့နေသည်တောင်မှလျှင်, ရေပိုက် clean ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်တစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသာအခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ ဒါဟာ guardrails ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းနှင့်လည်းပြုပြင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ကို Maintenance, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အစားထိုးနီးပါး Non-တည်ရှိဖြစ်ကြပြီးစျေးနှုန်း / စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးအလွန်မြင့်မားသည်။
အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆချောမွေ့မျက်နှာပြင်မရှိအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူမရှိ, အရည်ကြည်ဖု, ချေးများနှင့်ထိ မိ. လဲရှိပါတယ်။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကျယ်ပြန့်အခြားတစ်ဖက်တွင်စသည်တို့ကိုရေကူးကန်များ, ဥယျာဉ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်ထို့ကြောင့်, ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသစ်သားခြံစည်းရိုးနဲ့တူမဟုတျပါ, သူတို့ကခွတှစေားတိုက်ခိုက်ဘယ်တော့မှနေကြသည်။ လက်ရှိတွင်တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (TiO2) ကိုဗီနိုင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးထက်ပိုအကျိုးရှိသောထို့အပြင်ဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ အခြေခံခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်, ဒီအလွန်ဗီနိုင်းအတားအဆီးများ၏သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်၏အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းမှုနဲ့လောင်သောအသံကာကွယ်ပေးသည်။
ဗီနိုင်းနှင့်ပလတ်စတစ်အလားတူသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ စင်ကြယ်သော, သပ်ရပ်, လန်းဆန်းခံစားမှုပေးသည်။
ကုန်ကြမ်းပုံသေနည်းသို့တိကျတဲ့ Anti-ခရမ်းလွန်ခြင်းနှင့် stabilizer Add, extrude, အလုံးစုံအရောင် fix နှင့်ရေရှည်အရောင်မြှင့်တင်ရန်။
အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်စွဲစေ guardrail တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်သည်; အဆိုပါ guardrail တင်ပို့မီ, ထို crosspiece နှင့်အသေးစားလှံတံကိုပထမဦးဆုံးရောက်သည်နေကြသည်; တပ်ဆင်ကိုတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ရာအသေးစားတွင်းထဲသို့ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။
6. စောင်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားရနိုင်သလား
အဆိုပါ guardrail ၏ဖုံးကွယ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဗေဒထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲမညီမညာဖြစ်နေသောသို့မဟုတ်ငျးရှိုဧရိယာ installation ကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်သင့်လျော်သော။
ဤအကြောင်းများကြောင့်ဗီနိုင်း guardrails သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်သည်။ သင်သည်သင်၏ဟင်းလင်းပြင်ကိုအလှဆင်ဖို့, သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ guardrail ချင်လျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့ကြိုဆိုကြသည်။